पर्यटन « Clickmandu
शास्वतधामको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन्ः धार्मिक पर्यटनमा ठूलो
नवलपरासी । राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले शास्वतधामको कारण धार्मिक पर्यटनमा ठूलो योगदान पुग्ने बताइकी छन् । अर्बपति ब्यवसायी बिनोद चौधरीले लगानी गरेर स्थापना गरेको नवलपरासीको शास्वतधाम उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएकी
सगरमाथाको रोयल्टी बारे बहस शुरु, ३० करोड रुपैयाँमा सबैको दाबी
सोलुखुम्बु। स्थानीय निकायको चुनावी चर्चासँगै सोलुखुम्बुमा सगरमाथाको रोयल्टी कुन तहको सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यसअघि कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत जिल्लामा प्राप्त हुने र सो
काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइडमा अर्को तारे होटल थपिएको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिष्ठान पुल्चोकका पूर्वडिन डा. भरत पहारी र उनका भाई डा. मोहन पहारीले १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा
नवलपरासी । एक दशक अघिदेखि पूर्वाधार निमार्णमा स्थानीय प्रयास सुरु भए पनि सरकारी ध्यान नपुग्दा जिल्लाको माथिल्लो उचाइमा रहेको पर्यटकीय थलो देवचुलीमा पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । देवचुली संरक्षण र
पृथ्वीको रक्षा गर्न भन्दै ८६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा चढ्ने घोषणा !
काठमाडौं । आत्मविश्वास दृढ इच्छाशक्ति भएमा मानवका लागि असम्भव भन्ने केहि हुँदैन । यस्तै आत्मविश्वास र दृढ इच्छाशक्ति भएका मीनबहादुर शेरचन ८६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने घोषणा गरेका छन्
काठमाडौं । अन्तर्राट्रिय लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पर्यटनमन्त्री जीबनबहादुर शाहीले भनेका थिए,-‘२५ वटा ५ तारे होटल थपिँदैछन् ।’ पर्यटकका लागि स्तरीय होटलको अभाब हुन नदिन तारे होटलको संख्या बढाउन
कोलोम्बो । सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यको पुरस्कार श्रीलङकाले जित्न सफल भएको श्रीलङ्काली विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ । दक्षिणी चीनको गुआन्न्झोउ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा मेला (जिआइटिएफ)मा श्रीलङ्का सर्वाधिक लोकप्रिय गन्तव्यको
२५ वटा ५ तारे होटल खोल्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री जिबनबहादुर शाहीले २५ वटा ५ तारे होटल खोल्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । राजधानीमा भइरहेको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन लगानीकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटनमन्त्री शाहीले
दोलखा । दोलखाको पर्यटन विकासका लागि जिरी विमानस्थललाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत वर्ष फागुनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्र निरीक्षण
काठमाडौं । सरकारले हवाई सिटको संख्या वार्षिक ८० लाख पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिने वायुसेवाको वार्षिक सिट उपयोग क्षमता हाल ३६ लाख